छोराले प्रेम विवाह गरेकी बुहारीलाई पहिलो पटक घरमा देखेर सासु बेहोस् , खासमा के थियो त्यस्तो ? – Hamro24News
July 9, 2021 adminLeaveaComment on छोराले प्रेम विवाह गरेकी बुहारीलाई पहिलो पटक घरमा देखेर सासु बेहोस् , खासमा के थियो त्यस्तो ?
एजेन्सी । छोराले प्रेम विवाह गरेकी बुहारी घर खोज्दै आइन् । जब नयाँ बुहारीलाई सासुले पहिलो पटक देखिन् वेहोस भइन् । यस्तो अनौंठो विवाह भारतको सासाराम, बिहारमा भएको छ, जुन जताततै चर्चा भइरहेको छ। जब सासु बुद्धीले वुहारीलाई देखिन् विवाहलाई स्वीकार गरिनन्। वास्तवमा केटोले किन्नरसँग विवाह गरिसकेका थिए। समाजको कारण, सासूले उनीहरू दुबैलाई घरबाट बाहिर निकालिदिइन् ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
छात्रबृत्तिमा अमेरिका गएका नेपाली युवकको गो’ली काण्डमा निधन, धेरै नेपाली भागेर बाँचे?